Amandla: iilitha ezingama-35
Ubukhulu: malunga ne-217x16.5 × 16,5 cm
Imilinganiselo yepleyiti esezantsi: 14.5 × 18 × 0.8cm
Ubunzima bomzimba: malunga. 8.6 kg
I-KR-04 Ibhokisi ibhokisi 760 10.2 8.6 1.00 113.50 38.00 21.00
Imisebenzi engaphezulu nangaphezulu yamachibi kunye nemisebenzi yaselwandle ikhokelele ekuveleni kwekholamu yeshawa yelanga. Ingasetyenziselwa kwizitiya, iilwandle kunye namachibi. Emva kokuqubha, abasebenzisi banokusebenzisa amanzi afudumeleyo kule ishawa ukuhlamba ukungcola okuseleyo kwimizimba yabo.
Ngokungafaniyo neshawa yangaphakathi, ishawari yangaphandle yelanga inokufakwa ngokulula ngaphandle kokudiliza udonga kunye nokubhola. Le shawa inenxalenye ephambili kunye nezinto ezimbalwa, ezenza kube lula ukudibana. Yidibanise nje nombhobho oqhelekileyo wegadi kwaye uyifake kumgangatho othe tyaba.
Ukuqinisekisa ubomi babo bokusebenza kunye nokuzinza, iishawari zethu zelanga zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, kubandakanya ubhedu olunganyangekiyo umhlwa kunye nemibhobho ehlanganisiweyo yePVC. Siyavuya ukuxhasa inkonzo yasemva kokuthengisa, ukuba udibana nayiphi na ingxaki esemgangathweni ngexesha elithile.
Ishawa yelanga yangaphandle i-100% inikwe amandla lilanga. Tube eyenziwe ngezinto ezikhethekileyo ifunxa amandla elanga, iwuguqula ube bubushushu, kwaye ifudumeza amanzi ngaphakathi kubushushu obumalunga ne-60 ℃. Ke ngoko, akukho mfuneko yeengcingo kunye neebhetri, ukugcina ngokufanelekileyo amandla kunye nokukhusela okusingqongileyo.
Intloko yeshawari eguqukayo inokujongwa ngokwendlela yokuhlamba kwabantu kunye nokuphakama. Uyilo lomntu luhlangabezana neemfuno zokuhlamba zamaqela ahlukeneyo, okwenza ishawa yangaphandle ibe lula ngakumbi.
Isitshizi sokutshintshela phezulu
Abantu bobukhulu obahlukeneyo kunye nemikhwa yokuhlamba baneemfuno ezahlukeneyo zendlela yokuhamba xa uhlamba. Njengeeshawari yangaphakathi, ukutshiza okuphezulu kwikholamu yeshawa yangaphandle kunokujoliswa ngokwendlela yokuhlamba yabantu kunye nokuphakama. Uyilo lomntu lwenza ishawa yangaphandle ibe lula ngakumbi.
Uthotho lweOctagon zezona mveliso zethu zithengiswa kakhulu, ezifunyanwa ngabathengi abangaphezulu kwayo yonke iminyaka. Ngokungafaniyo noyilo lwesilinda, uyilo lwe-octagon lubalaselisa uluvo lomgca, oluhambelana ngakumbi nobuhle babantu banamhlanje. Ayizisi kuphela kuyilo olumnyama lonke olumnyama, kodwa zize zenziwe ngebrashi, uyilo lwesilivere. Zonke ezi zamkelwe kakuhle.
Egqithileyo Iimodeli ezahlukeneyo ishawa yelanga emfutshane
Okulandelayo: Isilinda enkulu yeshawari yelanga